निरंकुश तानाशाह, प्रजातन्त्र रक्षा अनि चिली र एम. सि. सि. | HimalDarpan
निरंकुश तानाशाह, प्रजातन्त्र रक्षा अनि चिली र एम सि सि। यी शब्द राजनीतिमा अक्सर प्रयोगमा आइरहने शब्द हुन। आखिर प्रजातन्त्र कतिबेला संङ्कटमा पर्छ?
नेतृत्व गर्ने र शासन गर्ने बिचको लडाइमा शासक हाबी हुँदा साच्चै प्रजातन्त्र धरापमै पर्ने रहेछ। विश्व इतिहासमा प्रजातान्त्रिक धराप र रक्षाको ठूलो लडाई दक्षिण अमेरिकी मुलुक चिलिमा भएको घटना सङ्ग ज्यादै नजिक छ। सन् १९७३ पहिले एउटा बिकासको बाटोमा हिँडिरहेको मुलुक एक्कासी दुर्घटना हुन पुग्यो। बिकासोन्मुख मुलुकमा बिकसित मुलुकले खेल्ने राजनिती र आर्थिक प्रभावले पूरा राज्य नै सङ्कटमा पार्ने रहेछ।
सन् १९७३ सेप्टेम्बर ११ चिलिको इतिहासकै कालो दिन, जुन दिन चिली सैनिक जर्नल अगस्तो पिनोचेटले तत्कालिन राष्ट्रपती सल्भाडोर एल्लेन्डेलाई नजरबन्दमा राखेर शासन कु गरेका थिए। उनी सोसिलिस्ट पार्टी निर्वाचित राष्ट्रपति थिए। शैक्षिक, कृषि, औधोगिक र गरिबिको समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्न खोजेको राज्यमा अमेरिकन सहयोग र सम्झौताको प्रस्ताव आयो जसमा मुलुकी हित नहुने भन्दै एल्लेन्डेले अस्विकार गरे।
जसले गर्दा अमेरिकन सरकार चिलिमा बिग्रहको राजनिती खेल्न थाल्यो र त्यहाँको सेनालाई हातमा लिएर सत्ता कब्जामा सफल हुन पुग्यो। केही वर्षमै चिलिमा अमेरिकन दबदबा हाबी हुन थाल्यो ब्यापारिक कब्जा गर्न थाले।
एल्लेन्डेले बिरोध गरेपछि राष्ट्रपती निवासमा बम बर्साइयो। दङ्गा भयो। जताततै अशान्ती सुरु भयो। एकातिर अमेरिकन मोनोपोली अर्को तिर जर्नल पिनोचेट्को दबदबा बाट जनता असन्तुष्ट हुनथाले। उनको बिरुद्द बोल्नेलाई झुन्ड्याइन थालियो। महङ्गी र भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्न थाल्यो। जनताबाट बिरोध हुन थाल्यो। तर निरङ्कुश तानाशाही शासकले आवाज दबाइरहन्थ्यो। करिब १७ वर्षको उनको शासनमा ३००० भन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो भने लाखौ जनता बेपत्ता पारिएको थियो। तर सहनशीलताको बाँध भत्किसकेको थियो। जनताले सहन गर्न सकेनन् र एकसाथ चौतर्फी बिरोध सुरु भयो।
धुर्त शासकले नयाँ रणनिती खेल्न थाल्यो। उसले जनतालाई प्रतक्ष्य सोध्न थाल्यो, कि उसको शासन ठिक छ कि छैन? त्यतिबेला चिलिलाई क्युबाले साथ दिइरहएको थियो। पिनोचेटका साथी जर्नल अल्बर्टो बेचलेट समेत उनको बिरुद्द उत्रीए किनकि उनी फेरि प्रजातान्त्रिक शासन चाहन्थे तर क्रुर शासकले उनको हत्या गरेर परिवारलाई नजरबन्द गर्न थाले। जनताले उसको नडराई खुलेर बिरोध गर्न थाले र अन्त्यमा सन् १९९० मा जनताले पुनः प्रजातान्त्रिक शासन प्राप्त गर्न सफल भए।
त्यसपछी सन् २००६ मा चिलिमा बेचलेटको छोरीले नै राष्ट्रपतिको उमेदवारी दिइन् र चिलिको गृह युद्द पछिको पहिलो राष्ट्रपती भइन मिचेल बेचलेट। उनी ल्याटिन अमेरिकाकै सफल महिला नेत्री भइन उनले त्यतिबेला ल्याटिन अमेरिकाकै धनी कम्युनिस्ट लिडरलाई भारी मतले हराएकी थिइन। त्यसपछी आजको दिनसम्म ४ पटक चिलिमा राष्ट्रपती निर्वाचन भएको छ र प्रजातान्त्रिक शक्ति विजयी भएको छ।
नेपालमा अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता अनि यहि समयमा अमेरिकन सहयोग भनेर छलफल चलिरहेको एमसिसीले कतै मुलुक सङ्कटमा पर्ने त होइन?
उता केपि ओलिले मध्यावधि निर्वाचनको नाममा सत्ता त्याग गर्न नसक्नु र पुर्व सेनापती रुक्मांगद कटवालको गृहमन्त्री बनाउने समाचार आइरहँदा भोलीका दिनमा चिलिको अवस्थामा नेपाल पुग्छ कि भन्ने डर मनमा रहिराखेको छ।
हाम्रा नेताहरु एम सि सि पास गर्न आतुर छन्। जनता सहि वा गलतको अन्यौलमा छन्। थाहा छैन भोलिका दिनमा एम सि सि पास भए नेताले भने जस्तो समृद्द नेपाल हेर्न पाइन्छ कि चिलिमा जसरी कुनै तानाशाहबाट शोषित हुनुपर्छ?
उता राजाको शासनकालबाट मुक्त भएर १० बर्षको जनयुद्ध पछि पाएको गणतन्त्रको माया पनि उत्तिकै छ। यता नाकाबन्दी भुकम्प अनि कोरोनाको कहरबाट प्रभावित आर्थिक पाटोलाई सम्हाल्न उत्तिकै हम्मे हम्मे भैरहएको बेला जनताले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बेला सरकारमा अस्थायित्व बढ्दै जानू यतिबेलै एम सि सिको प्रस्ताव र छलफल भैरहनु साँच्चै भयानक स्थितिको सामना गर्न परि रहेको छ आम जनताले।
सशस्त्र प्रहरीद्वारा १ सय १ किलोमिटर सीमाक्षेत्र शिल